Mumwe Life Share It
3 Nzira kuramba Mwari
Wati ndaramba Mwari Universe? Zvitende kana kwete, ichi chinokosha mubvunzo kuti tose kufunga. Zviripachena muMagwaro kuti hupenyu husingaperi ndehwemahara ...
kuvaKristu, mubvunzo harisi kana kwete ticharamba nemiedzo, asi sei isu achapindura patinoita. In Luke 4:1-2, tinoverenga nezvekuedzwa kwaJesu uye sei ...
Kune zvinhu zvishoma kuti kumutsa rudo mukati memoyo wangu Jesu akaita kunzwa vaKristu vatsva - kana vaKristu - kuita paruzhinji ounyanzvi hwokugadzira kutenda kwavo kuburikidza nokubhabhatidzwa. I think of ...
Sei Tava Vakarurama pamberi Mwari?
Sei isu vakarurama pamberi paMwari? Hazvina zvirokwazvo iroro kuremekedza umo Kristu waiva mutadzi. Nokuti vakafunga nenzira panzvimbo yedu, kuti agogona ...